ဖြူနု ဝင်းမွတ် နေ တဲ့ အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား မြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှား ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ဖြူနု ဝင်းမွတ် နေ တဲ့ အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား မြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှား ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
By Cele MinPosted on February 20, 2021 February 20, 2021
ပုံ လေး တွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ် Lလစ်ရှား တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ က တော့ မခို့တရို့ ပုံရိပ်လေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အ ပြည့် ရှိ တဲ့ ပုံလေး ကို တင်ပေး လာတာ ပဲဖြစ် ပါ တယ်..၊၊ Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
မြင် သူ တိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ် နော်..။ မော်ဒယ်လ် လော က ကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့အားပေးဝန်းရံ မှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ် ပါ တယ်..။ ယောကျာ်းလေး ပရိ သတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုကို လည်း အများဆုံး ရရှိထား တာ ပါ..။
သူ မ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျ ပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ရေ ပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိ သ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။ အခုဆိုရင်လည်း မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ လန်းနေ တဲ ဗီဒီယိုလေး ကို ပရိတ်သတ်ကြီး လည်း ကြည့် ရှု့ ခံစား နိုင် အောင် ကူးယူ ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါ တယ် နော် … .
ပုံ ေလး ေတြ တိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္ Lလစ္ရွား တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္း ေန တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။သူမ က ေတာ့ မခို႔တရို႔ ပုံရိပ္ေလး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ အ ျပည့္ ရွိ တဲ့ ပုံေလး ကို တင္ေပး လာတာ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္..၊၊ Lလစ္ရွား ရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
ျမင္ သူ တိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ Lလစ္ရွား ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္..။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာ က ကို ဝင္ေရာက္တာ မၾကာေသးပင္မဲ့ ပရိသတ္ အမ်ား အျပား ရဲ့အားေပးဝန္းရံ မႈကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိ လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ေယာက်ာ္းေလး ပရိ သတ္ ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးမႈကို လည္း အမ်ားဆုံး ရရွိထား တာ ပါ..။
သူ မ ရဲ့ ဆက္ဆီ က် ၿပီး အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္နိုင္ သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ေရ ပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားကာ ပုရိ သ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾက တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။ အခုဆိုရင္လည္း ေမာ္ဒယ္လ္ Lလစ္ရွား ရဲ့ ေရကူးဝတ္စုံေလးနဲ႔ လန္းေန တဲ ဗီဒီယိုေလး ကို ပရိတ္သတ္ႀကီး လည္း ၾကည့္ ရႈ႔ ခံစား နိုင္ ေအာင္ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ရပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post လှပတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ချပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်
Next post ပရိတ်သတ် ကြီး အံ့သြသွား စေမယ့် အမိုက် စား ကောက်ကြောင်းလေးပေါ်အောင် အကလေးနဲ့ ဂေါ်ပြလိုက်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး